Puntland oo ka laabatay go’aankii masaajidda | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Puntland oo ka laabatay go’aankii masaajidda
Garowe (Halqaran.com) – Puntland oo horay u shaacisay in la xiro Masaajidada ku yaallo deeganada Puntland cabsida laga qabo Caabuqa Coronavirus awgii ayaa waxaa soo baxay in Maamulka dib ugu laabtay go,aankaasi.
Culimadda deeganada Maamulka Puntland ayaa si adag uga dhiidhiyay amarka ka soo baxay Wasaaradda Cadaaladda Puntland ee sheegaayay in la xiro Masaajidada.
Wasiirka Cadaaladda Puntland Cawil Sheikh Xaamud, oo shalay kulan gaar ah la qaatay culimaa’udiinka masaajidda, ayaa sheegay in Maamulka ay khafiifiyeen go’aankeedii ahaa in la xiro masaajidda, si looga hortago Coronavirus.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay, in masaajidda ku yaalla Puntland ay sii furnaan doonaan, haddii aan kiisas coronavirus ah laga helin gudaha Puntland, balse haddii kiisas cusub la arko dhammaan la xiro doono masaajidda.
Puntland oo ka laabatay go’aankii masaajidda lagu xiray Cudurka Coronavirus